Ny App Mobile Mobile Management tsara indrindra
Ny PMSes sasany dia miraikitra amin'ny taonjato faha-20, miaraka amina rindrambaiko rindrambaiko napetraka eo an-toerana. Ny ankamaroan'ny PMSes sy ny Channel Managers dia mifototra amin'ny rahona ankehitriny, na izany aza, na dia amin'ireo aza, mety ho sarotra ho an'ny mpikambana isan-karazany ao amin'ny ekipa ny mahazo vaovao amin'ny fotoana ilany izany.
Na dia tsara aza ny fampiharana tranokala amin'ny fiasana amin'ny solosaina, dia tsy mora ampiasaina izy ireo rehefa mihazakazaka. Betsaka ny PMSes sy Channel Managers miorina amin'ny tranonkala no tsy mandray andraikitra. Ireo izay manavao kokoa dia manana famolavolana mamaly, na izany aza ny ankamaroany mbola tsy manana fampiharana finday teratany.
Ahoana ny fomba hanampian'ny Zeevou's Mobile App?
Ny ekipanay ao Zeevou dia ezahina ho lohalaharana amin'ny haitao vaovao hanampy anao hitsitsy fotoana sy hanatsara ny fizotry ny asa aman-draharaha. Amin'ny fampitomboana ny fahombiazanao, dia mikendry ny hanampy anao hitsimbina vola izahay ary hanatsara ny tombom-barotrao.
Ho fandraisana anjara amin'ity dingana ity, dia mamorona rindranasa finday izahay hampiasain'ny mpikambana samihafa ao amin'ny ekipanao. Ny fizarana voalohany amin'ny fampiharana izay novolavolainay sy navoakanay dia fampiharana finday ho an'ny mpikarakara trano. Io dia ahafahanao mandeha ho azy ny fifandraisana eo aminao sy ny mpikarakara tokantranonao na ny orinasa mpanadio avy any ivelany. Ankoatry ny famelana anao hanao automatique ny famoronana sy ny fanendrena ny fanaraha-maso sy ny asa an-trano antonony, dia mamela ihany koa ny famokarana asa an-tanana. Ankoatr'izay, azonao atao ny mampita hevitra manan-danja amin'ireo mpikarakara trano ao Zeevou, ary ny mpikarakara trano dia afaka mitatitra izay olana hitan'izy ireo mivantana amin'ny alàlan'ny Zeevou Mobile App.
Raha amin'ny fidirana amin'ny rindranasa finday ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa hafa, manaraka ny anay tondrozotra, dia manome ny mpiasan'ny Maintenance fidirana amin'ny lahasa amin'ny findainy. Io dia hahafahan'ny mpiantoka asa fikojakojana mijery ireo asa miaraka amin'ny mombamomba ny ora, ny toerana ary ny fidirana amin'ilay trano.
Taorian'ny famoahana ny Maintenance Mobile App, mikasa ny hiasa amin'ny Host Mobile App izahay. Io dia hamela ny mpitsidika hitantana ny famandrihan-dry zareo eny am-pandehanana ary hampiakarana mora ny vidiny raha vao henony fa voamarina ny hetsika eo an-toerana manaraka.
Mandritra ny fotoana maharitra dia mikasa ny hiasa amin'ny App Investor Mobile izahay ho fanampin'ny vavahady mitatitra ny tompona fotoana tena izy izay efa novolavolainay ho rindrambaiko web, ary App vahiny iray izay hivelatra amin'ny fisehoan'ny Guest Experience misy anay ankehitriny.